Kolikoly, Tsy misy indrafo hoy ny Filoha : hatreto, mifandraika amin’ny kabary miezinezina izay lazainy ve ny fihetsika asehon’ny fitondrana ? - Transparency International - Initiative Madagascar
Kolikoly, Tsy misy indrafo hoy ny Filoha : hatreto, mifandraika amin’ny kabary miezinezina izay lazainy ve ny fihetsika asehon’ny fitondrana ?
Nivoaka ny 25 Jona 2019 ao amin'ny
«Kolikoly, Tsy misy indrafo hoy ny Filoha : hatreto, mifandraika amin’ny kabary miezinezina izay lazainy ve ny fihetsika asehon’ny fitondrana ?»
Fanambaran’ireo firaisamonimpirenena misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly
Izahay, Firaisamonimpirenena misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly, dia miandrandra ny fahombiazan’ity farany, ho tombontsoan’ny olom-pirenena rehetra. Ankehitriny, manao izao hetsika izao izahay ho fanombanana ny fivoarana nisy tatoato amin’ny ady amin’ny kolikoly ary koa hanaitra manoloana ireo heverinay fa mampiahiahy.
Tsiahivina fa tamin’ny alalan’ny fanambarana izay natao ny 20 febroary 2019, nandritra ny Filankevitry ny Minisitra, ny Filohan’ny Repoblika dia nanamafy ny finiavany hiady amim-pahombiazana amin’ny kolikoly eto Madagasikara, ary namafisiny fa tsy hisy ny fandeferana manoloana ny izany.
Ankehitriny, izahay firaisamonimpirenena dia mahatsapa fa :
Mbola miandry foana ny fandaniana amin’ny alalan’ny didy hitsivolana ilay lalàna mahakasika ny fanagiazana sy famerenana ny fananana azo tamin’ny tsy ara-dalàna.
Tany ampiandohan’ny volana may 2019, raha ho tsiahivina ny mahazava-dehibe ity lalàna ity, dia nanoratra taratasy misokatra ho an’ny Filohan’ny Repoblika ny Firaisamonimpirenena. Namolavola horonan-tsary fohy nentina nanazava ity lalàna ity ihany koa izahay ho an’ny vahoaka. Ary etoana dia hamafisinay fa tsy azo ihodivirana ny fananana lalàna mifanaraka amin’ny fenitra iraisam-pirenena, momba ny fanagiazana ny harena azo amin’ny tsy ara-dalàna.
Noho izany, manaitra indray izahay Firaisamonim-pirenena ny amin’ny amin’ny mety famohana lalàna tsy ahitana ireo tena antom-pisiany voarakitra tao anatin’ilay volavolan-dalàna tany am-piandohanaary ny maha-fitaovana enti-miady amin’ny kolikoly azy.Tokony tandrovan’ity lalàna ity ny foto-kevitra tsy mitanila manoloana ireo sokajin’olona rehetra nanao fandikan-dalàna.Hamafisinay ihany koa ny fangatahanay hahalala ny voarakitra ao amin’ ilay lalàna mialoha ny fandaniana azy, hahafahanay mijery fa mari-pototra ilay izy.
FITSARANA MISAHANA MANOKANA NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY (PAC) : Nahitana fihenana mihoa-pampana ny tetibolany, ahoana no hampahomby azy manoloana izany ?
Tamin’ny alalan’ny tetibolam-panjakana 2019 nasiam-panitsiana, dia hitanay fa nihena hatramin’ny 44% ny tetibolan’ny PAC ka lasa 3,9 lavitrisa Ariary izany raha tokony ho 7 lavitrisa1. Manahy ny amin’io fihenana io izahay, satria na ny tetibola natokana ho an’ny Direction de la Coordination Nationale PACs tao amin’ny tetibolam-panjakana 2019 tany am-piandohana aza dia efa kely raha oharina amin’ny filàn’io andrim-panjakana io. Tsiahivina fa amin’ity taona ity ihany koa no tokony hametrahana ny PAC any Mahajanga. Moa ve tsy midika ho tsy firaharahiana miharihary ny ady amin’ny kolikoly io fampihenana ny tetibolan’ny PACio, na dia teo aza ireo fanambarana niezinezina nataon’ireo tomponandraiki-panjakana?
Ao anatin’ny Paikadim-Pirenena Iadiana amin’ny Kolikoly, dia voalaza fa tokony omena ny enti-manana ampy ireo rafitra miady amin’ny kolikoly rehetra, ary izany dia singa ahitana ny tena finiavana ara-politika marina hiadiana amin’ny kolikoly (tanjona manokana n°3). Kanefa mifanohitra amin’izany ankehitriny no miseho.
Tsy fifandanjan’ny tetibola natokana ho an’ny andrim-panjakana misy : HCJampitahaina amin’ny fitsarana manokana momba ny andramena sy/na « bois d’ébène »
Etsy andaniny, ny tambikaraman’ireo mpikambana ao amin’ny HCJ dia mitentina 2,74miliara Ariary, izany hoe tsy nokitihana raha oharina ny tao amin’ny tetibolam-panjakana 2019 teny am-piandohana. Tsara ho fantatra fa miisa 11 ireo mpikambana ao amin’ny HCJ, araka ny andininy 136 ao amin’ny Lalàm-panorenana. Tsapanay fa mihoampapana loatra izany tambikarama 20 tapitrisa Ariary isam-bolana ary isan’olona izany (i) raha izao fahantrana misy eto Madagasikara izao, (ii) mihoatra amin’ny habetsahan’ny asa iandraiketan’ny HCJ amin’izao fotoana izao izay tokony ho fantatry ny olompirenena,ary anisany ny raharaha dinihina eo anivon’ity andrim-panjakana ity (iii) raha oharina amin’ny tena asa ataon’ireo andrim-panjakana misahana ny ady amin’ny kolikoly izay tena andrandrain’ny olompirenena tokoa manoloana ny kolikoly misy eto Madagasikara.
Tsara ho fantatra ny antony nahatonga anareo mpitondra nifanesy hamaritra io tambikarama io ho ambony loatra io.Ny fanomezana tombony be tahaka izao dia miteraka fitanilana amin’ny fikirakirana ireo raharaha manoloana azy ireo. Ireo mpikambana ao amin’ny HCJ dia mety ho alaim-panahy hilefitra manoloana ireo mpitondra ankehitriny, na iza na iza olona ambony hotsaraina ao.
Etsy ankilany kosa, ny Fitsarana misahana manokana ny andramena sy/na “bois d’ébène” dia tsy manana afa-tsy 106 tapitrisa Ariary raha ny lalàn’ny teti-bola 2019 nasiam-panovana no jerena. Nahitana fihenana ihany koa ny tetibola natokana ho an’ity fitsarana ity raha 116 tapitrisa no vinavina.
Rafitra mpanara-maso ny Volam-panjakana, rafitra fotsiny ihany : inona no anjarany voarakitry ny Lalàn’ny tetibolam-panjakana mba hahombiazan’ny ady amin’ny kolikoly ?
Manan-danja ihany koa ny fahafahan’ireo rafitra mpanara-maso manao ny asany manoloana ny ady amin’ny kolikoly sy ireo fanodikodinana volam-panjakana.Amin’ny ankapobeny dia nahitana fihenana 16% ny tetibolan’izy ireo, izay mihatra indrindra ho an’ny Sampana Mpanao ny fanaraha-maso Anatiny (-92,2%) ary ny Vaomieran’ny tsenam-baro-panjakana (-75,8%). Anisan’izany ny Fitsarana momba ny Kaonty sy ny CCFVP izay miandraikitra ny fanarahan-dalàna ary ny fangaraharan’ny kaontin’ny fampielezan-kevitra. Tsikaritra fa ambany be foana ny teti-bola natokana ho an’reo rafitra ireo sy ny hafa tsy voatanisa eto, ary mbola hita izany ato amin’ny teti-bola 2019 nasiam-panovana.
Araka ny voalaza rehetra teo, izahay vondron’ny firaisamonimpirenena misehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly dia maneho ny ahiahinay ny amin’ny tsy fahombiazan’ny ady amin’ny kolikoly, raha ny dimy volana voalohany tamin’ity fitondrana vaovao ity no jerena. Mbola tsy tara izao handraisana andraikitra ary hampisehoana tokoa ilay tena finiavana hamerenana indray ny fitokisan’ny olompirenena ireo andrim-panjakana rehetra. Ny Firaisamonimpirenena dia maniry hatrany ny hisian’ny fiovana ho amin’ny tsara kokoa.Vonona lalandava hiara-hiasa amin’ny rehetra, anisan’izany ny Fitondrana, ary ho malina hatrany amin’izany.
FIRAISAMONIM-PIRENENA MISEHATRA AMIN’NY ADY AMIN’NY KOLIKOLY MANAO SONIA ETSY AMBANY
ONG IVORARY, Transparency International - Initiative Madagascar (TI-IM), ONG TOLOTSOA, MIEL (Mouvement pour l’Intégrité des Elections et des Leaders), ny Hetsika ROHY (PFNOSCM, ONG RAVINTSARA, AVG, OPTA, MSIS TATAO, CCOC)
NB : Ny Lalàn’ny tetibolam-panjakana 2019 nasiam-panitsiana no nifotoranay tamin’ny nanao ity fanambarana ity, satria mitenyho azy ireo tarehimarika momba ny fandaniana ao. Ity manaraka ity ny rohy: http://www.mef.gov.mg/page_personnalisee/index/news/141.
Ny TOME 2 no vakiana sy alaina. : Document budgétaire. Mikasa ny hikarakara adi-hevitra misokatra ho an’ny rehetra mahakasika ny LFR 2019 ny vaomiera misahana ny fangaraharan’ny tetibolam-panjakana ao amin’ny Hetsika ROHY, mba hanazavana izany ho an’ny olompirenena hahafahan’izy ireo maneho ny heviny ihany koa ary manolotra soso-kevitra.